Fikarohana momba ny firaisana Ny tantaram-piainan'ny lasa teo aloha miaraka amin'ny Fahatongavan-tena, famonoan-tena, karma & fahaiza-miaina taloha: tranga famerenana indray ny Helmut Kohler | Ruprecht Schultz - Fikarohana Reincarnation
Fomba fijery: fahatsiarovana ny olon-dehibe
Helmut Kohler's Business successfully as a Timber Merchant & Broker
Helmut Kohler dia teraka tamin'ny Janoary 7, 1834, ho an'ny fianakaviana Kristiana ao Wilhelmshaven, Alemaina, seranan-tsambo iray any amin'ny Ranomasina Avaratra. Nanambady izy ary nanan-janaka maro, anisan'izany i Ludwig, izay teraka tany 1873.
Helmut dia mpandraharaha vita amin'ny hazo, mpitaingina sambo ary mpitrandraka lasantsy tao amin'ny tanànan'i Wilhelmshaven. Nividy hazo avy any amin'ny firenena samihafa izy, anisan'izany i Norvezy, Soeda, Rosia ary Amerika, izay nentin'ny sambo. Izy no nanamboatra ny hazo tao anaty lasopy ary namidy izany ho kitay.
Helmet dia maminavina amin'ny hazo, mamoy ny ainy & mamono tena
Tao amin'ny 1887, nihevitra i Helmut fa hiakatra ny vidin'ny kitapo entana noho ny hetraketraky ny volavolan-dalàna ary nandoa ny vidiny avo lenta tamin'ny hazo be avy any ampitan-dranomasina. Tsy nekena ny hetra ary tsy lany ny vidin'ny hazo. Io fihetsika diso io dia nahatonga ny fahaverezan'ny vola be.
Tao anatin'ny ezaka mba hamelomana ny ara-bola, dia nanangona ny kaontiny amin'ny kaikitry ny kaonty ara-bola izy. Indrisy anefa, nandrahona ilay mpandraharaha ka nandositra niaraka tamin'ny volan'ny orinasa rehetra.
Rava i Helmut noho ny fahaverezany ara-bola. Tamin'ny novambra 16, 1887, taorian'ny nanatrehany fankalazana ny andro fankalazana ny andro fankalazana sy ny vavaka, dia niverina tany amin'ny biraony i Helmut. Nametraka revolisiona tao amin'ny tempoliny izy ary nitifitra teo amin'ny lohany. Maty tamin'ny novambra 23, 1887 izy.
Helmut Reincarnates tahaka ny Ruprecht Schultz amin'ny famonoan-tena
Ruprecht Schultz dia teraka tamin'ny Oktobra 19, 1887, ao Berlin, Alemaina ho an'ny ray aman-dreny Kristiana, dimy herinandro talohan'ny nahafatesan'i Helmut Kohler. Raha izany no izy, raha raisina io tranga io, dia mampiseho toe-javatra mampiavaka ny nofo izany, izay ahafahan'ny fanahy mitoetra mihoatra ny vatan'ny olona iray isaky ny mandeha. Diniho fa tany Rabe i Ruprecht nandritra ny volana 8 raha mbola velona i Helmut.
Amin'ny maha-zaza azy, rehefa ketraka i Ruprecht, dia manamboatra ny tanany amin'ny basy izy, miaraka amin'ny rantsantanana manondro ny baran'ny basy. Hametraka ny rantsan-tanany ho any amin'ny tempoliny izy ary hiteny hoe: "Mitifitra aho." (1)
Nataon'i Ruprecht nieritreritra ny hitifitra ny tenany tao amin'ny tempoly matetika ny reniny ka nitaky ny hampitsahatra izany fihetsika izany.
Fony mbola zaza i Ruprecht dia liana tamin'ny revolisiona. Ankoatra izany, dia liana koa izy tamin'ny sambo sy ny fandefasana entana. Izy no nanamboatra sambo modely sy sarin'ny sambo. Ian Stevenson dia nanamarika fa tsy mahazatra izany ho an'ny zazalahy iray izay teraka sy natsangana tany Berlin, tanàna tsy misy seranan-tsambo.
Fahaizana momba ny fiainana taloha: Ruprecht dia maneho ny talentany ho an'ny fandraharahana
Rehefa nihalehibe i Ruprecht dia tsy dia liana loatra tamin'ny fanabeazana; Nalefa izy hanomboka raharaham-barotra. Niala tao an-tsekoly izy tamin'ny taona 18 ary nanomboka nanao asa fanasan-damba niaraka tamin'ny serivisy nanolotra azy, izay nanjary nalaza tamin'ny renim-pianakaviana tanora, izay nanamboatra lamban-java-maloto be. Tamin'ny taona 20 dia nanana mpiasa maherin'ny roapolo izy ary hitombo amin'ny orinasa 200 ny orinasa.
Ruprecht dia nanjary nanan-karena ary nahafinaritra ny fandraisana anjara tamin'ny raharaham-bahoaka. Lasa mpikambana tao amin'ny Vaomieran'ny varotra teo an-toerana izy ary solontena iray tao amin'ny filan-kevitry ny tanànan'i Berlin.
Reincarnation & Deja Vu ao amin'ny lalantsara maizina
Nanomboka tao amin'ny 1939 ny Ady Lehibe Faharoa, fony Ruprecht no 51 taona. Ny ady dia mety hanimba ny fiainan'i Ruprecht sy ny fananana ara-bola. Nandritra ny fipoahana baomba avy any Berlin no nahitana ny fahatsiarovana ny fiainana taloha.
Ruprecht dia notendren'ny manampahefana ao an-tanàna hitazana ny afo izay mety hitranga amin'ny fipoahana. Ruprecht dia niova tsy tapaka nanomboka ny Asabotsy hariva ka hatramin'ny Alatsinainy maraina, izay hijanonany ao amin'ny biraony fandraharahana mba hahazoana asa atao mandritra ny ora mangina. ny Ny birao dia tao amin'ny tranobe tranainy iray izay voatondro ho sehatra manan-tantara. Nanana fiarovana izy izay nipetrahan'ny làlana miolikolika. Ruprecht dia tokony handeha ho any amin'ny toerana azo antoka, mahazo ny bokin'ny kaontiny ary misaintsaina ny fomba nandehanan'ny raharaham-barotra.
Isaky ny mandehandeha any amin'ny fiarovana i Ruprecht mba hahazoana ireo boky kaonty, dia mety hanana ny eritreritra miverimberina izy hoe: "Efa teo aloha ianao taloha." (2)
Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha: Rehefa Mifohaza Manontolo i Ruprecht, dia mahita ny tenany hamono tena amin'ny andro fankalazana azy
Raha nandinika ny bokin'ny kaontiny izy ary nifoha tanteraka, dia nahita ny tenany nandritra ny fiainany taloha i Ruprecht. Ao amin'ny fanambarana fandraketana an-tsoratra, nanazava i Ruprecht:
"Hitako ny fomba fijeriko tamin'izany. Nanao akanjo ambony sy akanjo fitondra aho. Tonga tamin'ny lanonana iray tamin'ny andro manokana aho. Vita ny asako. Nisy mpiasa iray nihazakazaka niaraka tamin'ny vola - nanamafy azy io ary navotsotra. Koa dia nipetraka aho niaraka tamin'ny boky ka hitako tao tsy nisy ny ho avy. Nandritra izany rehetra izany. Avy eo aho dia tao anaty efitrano iray ary nametraka bala teny an-dohako teo amin'ny tempoly marina. Azonao atao ny miantso ireto sary miharihary ity, fa ho ahy kosa, tsaroany izy ireo. "(3)
Ao amin'ny fanambarana iray hafa, nanamarika i Ruprecht fa toy izany koa ny fanovana teo amin'ny fiainany taloha sy ny fampodiana azy ankehitriny nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, rehefa nipoitra ny fahatsiarovana:
"Ny toe-javatra nisy teo aloha dia nitovitovy tamin'ny iray tamin'izany fotoana izany. Ny toerana azo antoka dia toy izany koa ary mitovy ny bokin'ny kaonty. "(4)
Ian Stevenson dia nanamarika fa ny fahatsiarovan'i Ruprecht tamin'ny voalohany, saingy tamin'ny vanim-potoana dia nanjary nazava kokoa sy mazava kokoa izy ireo. Ny fahatsiarovana dia nitranga raha toa ka nifoha tsara i Ruprecht ary izy ireo ihany no nitranga fony izy tao amin'ny biraony nandritra ny adidiny fiambenana. Ny tranokalan'ny birao ao Berlin dia nanavao ny toerana misy ny birao tamin'ny fiainany teo aloha. Io toa mitovitovy amin'ireo no nahatonga ny fahatsiarovany taloha.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Ruprecht dia mahatadidy ny fandefasana entana sy ny lumbar mandritra ny androm-piainana any Wilhelmshaven
Tao anatinà fanambaràna iray nosoratan'i Ruprecht, nanazava ny fahatsiarovany:
"Hatramin'ny taona voalohany niainako dia nanana fahatsapana miavaka aho, miaraka amin'ny antsipirihany samihafa izay niainako tamin'ny fiainana taloha teo aloha izay nifandray tamin'ny fanorenana sambo na ny entana ary izaho no nisintona ahy. Izaho dia teo amin'ny fiainan'ny fiainana. Ho an'ity toerana ity dia fantatro fa nitranga tao amin'ny seranan-tsambo kely kely iray na efa lehibe izany; ary toa nieritreritra aho taty aoriana ary mazava kokoa fa io seranan-tsambo io dia Wilhelmshaven.
Ankoatra izany, dia toa tao amin'ny trano tranainy iray ilay lehilahy. Tamin'izany dia nisy efitrano kely misy tratra na karazana trano fandriam-pahalemana na fanoratana izay misy tahirin-kevitra manan-danja, bokin'ny kaonty ary mety ho vola ihany koa. Ilay olona nataoko dia nanao akanjo maotina tamin'ny endrik'io vanim-potoana io, toy ny hoe avy amin'ny sehatra iray manan-danja izy io na zava-nitranga tsy manan-danja. Momba ny datin'ireo fisehoan-javatra ireo-ny famonoan-tena ny olona izay ahy-dia toa ahy izany raha ny momba ny 1885. "(5)
Ruprecht koa dia nahatsiaro fa nandritra ny fiainany taloha, dia tafiditra tamin'ny orinasam-barotra natao tamin'ny hazo izy. Nanomboka nitazona diary i Ruprecht, nanoratra ny fahatsiarovany rehefa niposaka izy ireo. Tsy afaka nanamarina ny fahatsiarovany izy mandra-pahavitan'ny Ady Lehibe Faharoa.
Fanamarinana ny fahatsiarovana ny fiainan'i Ruprecht taloha
Ruprecht dia nahatsiaro fa ny fiainany taloha dia nandany tao amin'ny tanàna kely iray any avaratr'i Alemaina. Nahatsapa izy fa i Wilhelmshaven no toerana marina, saingy nieritreritra ihany koa tanàna maro hafa any Alemana izy teo amin'ny Ranomasina Avaratra.
Ruprecht nanoratra ho an'ny manam-pahefana any Wilhelmshaven ary tanàna sivy hafa, nanontany raha fantatr'izy ireo fa nisy mpandraharaha iray voakasika tamin'ny fandefasana ny hazo, ny orinasa mpitrandraka ary izay nitifitra ny tenany ary maty tao amin'ny 1880.
Avy amin'ireo tanàna folo no nosoratany, dia namaly avokoa izy rehetra ka nilaza fa tsy nisy olona tahaka izany, afa-tsy i Wilhelmshaven. Nanoratra ho an'i Ruprecht ny manamboninahitra iray avy any Wilhelmshaven ary nanambara fa nisy lehilahy iray avy ao amin'io tanàna io dia nahitana ny famaritana. Ilay lehilahy dia mpivarotra sambo sy mpihinana hazo, namono tena.
Tao amin'ny taratasy voalohany avy tamin'i Wilhelmshaven, nanoratra ilay manamboninahitra fa "Kohl" ny anaran'ny mpivarotra kitay. Rupright dia nahafantatra fa kely fotsiny io anarana io. Tao amin'ny taratasy faharoa avy amin'ny tompon'andraikitra, nanitsy ny anaran'ny fianakaviana tamin'ny "Kohler" ary nomena ny lahatenin'i Ludwig Kohler, zanakalahin'ny lehilahy, i Ruprecht. (6)
Ny fifandraisana dia nohavaozina tamin'ny alàlan'ny vatana vaovao indray: Ruprecht dia nahazo taratasy avy tamin'ny zanany taloha, izay manamafy ny fahatsiarovan'i Helmut ny fiainany taloha
Tamin'ny Septambra 17, 1952, nanoratra ho an'i Ludwig Kohler i Ruprecht izay namaly ary nanamafy fa nifanaraka tamin'ny fiainan'i Helmut Kohler, rainy ny zavatra niainan'i Ruprecht taloha. Ludwig, tao anaty taratasy ho an'i Ruprecht, dia nanome ity fijoroana vavolombelona manaraka ity:
"I Helmut Kohler, raiko, dia nanana raharaham-barotra lehibe tao Willhelmshaven izay nisy ny varotra tamin'ny hazo ary koa ny bozaka. Ny tranonay dia tao amin'ny 25 Friedrichstrasse, ary teo akaikin'izany dia tranobe tokana iray nampiasaina ho an'ny birao. Io trano io dia niatrika ny avaratra, ary tsy nisy afa-tsy ny varavarankely kely ihany, ka dia maintimainty foana teo. Tao an-joron'ny efitrano iray dia nisy toeram-piarovana somary antiquée, izay nolazainao. Ao anatin'izany vola izany, boky momba ny kaonty, ary koa boaty vola sy taratasy manan-danja. Matetika no nanao akanjo mainty ny raiko, ary rehefa nivoaka izy, dia nanao satroka ambony teo an-dohany.
Naka hazo tamin'ny sambo avy any Danzing, Konisberg, ary Mermel izy, saingy indrindra avy any Norway, Soeda, Finlande, Rosia ary Amerika. Tao amin'ny 1888 dia nieritreritra izy fa mety hitombo ny adidy amam-panao, ary nividy avy any ivelany izy, dia be dia be ny hazo. Mampalahelo fa fahadisoam-panantenana izany, satria nihena ny vidin'ny hazo ary mihoatra noho ny fiasan'ny fadin-tseranana. Sarotra ny nandoa ny faktiora tamin'izany.
Mba hahafahana mamakivaky ny krizy dia nikarakara ny kaontiny izy, izay 'tanany havanana' ary nankafiziny ny fitokisany tanteraka, mba hamoahana ny rakitsoratry ny fifanakalozam-bola ataon'izy ireo. Nihevitra ny roa tamin'izy ireo fa hikorontana izy ireo rehefa latsaka ny vidin'ny fifanakalozana. Tsy nitranga izany. Natahotra ilay mpitan-tsoratra fa hosamborina izy, ary nandositra tany Amerika izy ary nitondra vola be dia be tamin'ny vola natolotry ny orinasa.
Ny raiko dia tonga tamin'ny fisavorovoro tanteraka ary nitifitra ny tenany tamin'ny andron'ny vavaka sy ny fibebahana. Tsy maintsy nanambara ny bankirompitra ny orinasa, na dia tsy nilaina aza izany. Na dia novidina tamin'ny varotra an-terivozona aza ireo tranobe, ny biriky ary ny kitapo an-tanana, dia naloa avokoa ny mpandraharaha rehetra. "(7)
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraka indray ao amin'ny vatana: Ruprecht dia nihaona tamin'i Ludwig ary niaiky ny tantaran'ny fiainana taloha tany amin'ny sary
Tamin'ny 1956 tamin'ny Oktobra, dia nandeha sambo nankany Wilhelmshaven voalohany i Ruprecht, toerana nihaonany tamin'i Ludwig Kohler. Wilhemshaven dia kilometatra 370 na 230 kilaometatra avy any Berlin. Araka ny efa nomarihina, dia tsy mbola tany Wilhemshaven mihitsy i Ruprecht talohan'izay. Ludwig dia 12 taona fony namono tena i Helmut rainy. Ankehitriny, ho olon-dehibe, i Ludwig dia hihaona amin'ny vatana vaovao ao an-kibon-drainy.
Nilaza i Ruprecht fa fantany ny trano sasany, toy ny Efitrano Fanjakana, any Wilhelmshaven. Nolazainy fa rehefa nasehon'i Ludwig ny sarin'ireo ankizy Kohler, izay nalaina tamin'ny antokon'olona mpianatra, dia afaka nahafantatra ny zanany lahy hafa avy amin'ny vahoaka izy, na dia tsy afaka nahafantatra ny zanany vavy taloha aza izy.
Ian Stevenson, MD momba ny Herin'ny Helmut Kohler | Riprecht Schultz raharaha momba ny fanambadiana
Ho setrin'izany dia afaka nanamarina ny fahatsiarovany niainany taloha i Ruprecht tamin'ny fifandraisany tamin'i Ludwig Kohler, zanany lahy taloha. Ian Stevenson dia nieritreritra ny raharaha Helmut Kohler | Ruprecht Schultz no iray amin'ireo tranga nahazatra indrindra tamin'ny firazanany. Stevenson dia tena nahavariana ny fahatsiarovan-dRuprecht tamin'ny fanandramana niaina tamin'ny fiainam-piainana taloha momba ny raharaham-pandefasana sy ny hazo tao amin'ny tanànan'i Wilhelmshaven, izay niafara tamin'ny famonoan-tena. Stevenson dia nahatsapa fa ny fahatsiarovan-dry zareo dia tsy dia mahazatra loatra ny hitranga amin'ny zoma na fifandrifian-javatra.
Ny Karma ho an'ny famonoan-tena
Misy sazy ve noho ny famonoan-tena? Nametraka ity fanontaniana ity nandritra ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson aho, izay nantsoina anarana hoe Ahtun Re izay niasa niaraka tamin'i 2001. Ahtun Re no zavaboary manan-tsaina indrindra izay nifaneraserako hatramin'izay. Raha ny vola, ny vokatry ny famonoan-tena dia ny tsy maintsy hiverina hiverina indray ary hiatrika ny toe-javatra mitovy amin'izany izay nitarika ny famonoan-tena. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy afaka mandositra toe-javatra sarotra amin'ny alalan'ny famonoan-tena ny iray, satria ny iray dia tokony hiatrika ny toe-javatra mitovy amin'ny fiainana amin'ny ho avy.
Fiainana taloha Karma: Namoy ny fananany i Rupecht, nanoloana ny toe-javatra namono tena an'i Helmut
Ny trangan'i Helmut Kohler | Ruprecht Schultz dia manome ohatra mampihetsi-po amin'ity fitsipika ity. Hevero fa nanjary nanan-karena i Helmut tamin'ny fanondranana hazo tamin'ny entana sy ny fanodinana ny hazo. Rehefa niharatsy ny toe-draharaha ara-bola ary niatrika fatiantoka izy, dia namono tena izy mba handosirana ny voka-dratsin'ny fahaverezany.
Avy eo dia niorina indray ho an'i Ruprecht Schultz i Helmut, izay fony mbola tanora dia nampiseho fahaizana voajanahary ho mpandraharaha. Noho izany, toa i Ruprecht no toa nitazona talenta momba ny fandraharahana avy amin'ny fiainany taloha tahaka an'i Helmut. Ruprecht, toa an'i Helmut, dia nanjary mpanankarena. Nandray anjara koa tamin'ny adidim-bahoaka izy. Toa manampahefana ao an-tanàna ny helmet izay nanao akanjo fitafy ho an'ny andron'ny fibebahana sy ny vavaka. Ruprecht dia lasa mpikambana ao amin'ny Antenimieran'ny varotra ao an-toerana ary solontenan'ny filan-kevitry ny tanànan'i Berlin. Ny mombamomba ny fiainana dia voamarina fa hamerina.
Tahaka an'i Helmut, Ruprecht koa dia namoy ny hareny rehetra, na dia ho an'i Ruprecht aza, tsy noho ny fanapahan-kevitra ratsy momba ny fandraharahana. Raha ny mifanohitra amin'izany, nanamarika i Ruprecht fa nandritra ny androm-piainany teo aloha, dia mpahay lalàna mpandala ny nentin-drazana izy, izay nanalavitra ny loza mety hitranga, izay nanamafisany ny fahavoazana niaretany nandritra ny androm-piainany tahaka an'i Helmut. Ny antony nahatonga an'i Ruprecht ho lany tamingana dia ny fandringanana an'i Berlin nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Ny fisaratsarahan'i Berlin tany atsinanana sy andrefana taorian'ny ady dia nahatonga azy haka vola bebe kokoa.
Ruprecht nisotro ronono avy any amin'ny orinasa fony izy 68 taona ary nifindra monina niaraka tamin'ny vadiny avy any Berlin ho Frankfurt, izay nahafatesany tamin'ny taona 80 tao 1967.
Raha marina ve ny porofo fa tena zava-dehibe ny vatana vaovao, dia azo atao ve ny famonoan-tena?
Na dia samy manana ny fanapahan-keviny manokana aza ny tsirairay, dia manolo-kevitra fa tsy azo raisina ho safidy ho an'ny olona ao anatin'ny toe-javatra sarotra ny famonoan-tena noho ny antony maro:
1. Voalohany indrindra, tsy fantatry ny olona iray hoe oviana ny fiovana eo amin'ny fiainana. Tadidio fa i Ludwig, zanaky Helmut, dia nanamarika fa tsy novonoina ny famonoan-drainy, tahaka ny nividianan'ny orinasa hividianana an'i Helmut tamin'ny varotra an-terisetra, ny mpitrosa rehetra dia nomena. Helmut, toa hita fa nanamafy ny lanjan'ny fananany. Afaka niaina ny fiainany i Helmut ary nahafinaritra ny nahita ny fitomboan'ny zanany, na dia tsy dia mahafa-po loatra aza ny fomba fiainany.
Tao amin'ny asa fitsaboana nataoko, dia nahita tranga maromaro izay nahafatesan'ny olona famonoan-tena noho ny zava-nisy teo amin'ny fiainana. Tao anatin'ny taona vitsivitsy anefa dia niova be ny toe-javatra nisy azy ireo ary nahita fiainana tena sambatra izy ireo. Ny olona manana eritreritra hamono tena dia tokony hikatsaka fanampiana ara-pahasalamana. Mety hisy vokany tsara ny fitsaboana amin'ny psikoterapia sy ny fanafody fanavakavahana ary hanampy ny olona hahavita izany mandritra ny fe-potoana ketraka.
2. Ny famonoan-tena dia tsy afa-mandositra, satria mila hiverina hiatrika ny toe-javatra tahaka izany ihany koa, araka ny naseho tao amin'ny tranga nahazo ny zafikelin'i Helmut Kohler | Ruprecht Schultz. Ny famonoan-tena dia tsy mitarika ho amin'ny fanamelohana mandrakizay, araka ny fampianaran'ireo fivavahana sasany. Ny famonoan-tena kosa dia hitarika ny fanahy hiatrika ny lesona iray ihany, mba hahafahana mamolavola fanapahan-kevitra kokoa sy tsara.
3. Ny famonoan-tena dia miteraka traikefa ara-pihetseham-po ho an'ny olon-tiany izay tavela ao. Ankoatra ny fahatsapana alahelo noho ny fahaverezan'ny havan-tiany, ny fihetseham-po hafa izay tsapa dia ny fahatsapana ho meloka sy fisafotofoto, satria manontany tena ireo olon-tiany velona raha toa ka afaka nanao bebe kokoa mba hisorohana ny famonoan-tena. Misy vokany karmika ny mahatonga ny alahelo ho an'ny hafa. Ny fanaintainana ateraky ny olon-kafa dia mety mila traikefa amin'ny tra-boina amin'ny famonoan-tena amin'ny hoavy.
Any Etazonia, ny olona miady amin'ny fahaketrahana sy ny eritreri-dratsy dia afaka mahazo fanampiana amin'ny alalan'ny:
Famotsoran-keloka famonoan-tena manolo-tena eo amin'ny firenena: laharana 1 800 273-8255
Ity tranga ity dia ahitana karazana mahaliana maro:
Fahatsiarovana ny fiainana tany am-piandohana: Nofaritanay ny fahatsiarovan-tenan'ny jeografia ho toy ny fahatsiarovana ny fiainana taloha na ny fihetseham-po izay atahorana amin'ny fitsidihana toerana iray taloha. Amin'ity tranga ity, tsy fitsidihana toeram-ponenana efa lasa teo aloha, fa ny famerimberenana tantara efa nisy taloha izay nanentana fahatsiarovana.
Tadidio fa rehefa handeha ho any amin'ny sehatra maizimaizina i Ruprecht mba hijery ireo bokin'ny kaontiny, dia nihevitra izy fa efa teo am-piainana izao. Taty aoriana, rehefa niverina tao an-dalantsara izy ary naka ny boky kaonty avy amin'ny safidy, dia nanomboka niova ny fahatsiarovana, izay nanjary nazava kokoa sy mazava kokoa.
Ny fanantenana ho an'ny fahatsiarovan'i Ruprecht dia tao anatin'izany toe-javatra izany ihany, birao maizimaizina ahitana boky tranainy azo antoka sy azo antoka, izay namerina namono tena ny famonoana an'i Helmut.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Rehefa avy namono tena i Helmut, dia teraka indray tao amin'ny Ruprecht ary nihaona tamin'i Ludwig Kohler, zanakalahin'i Helmut sisa velona. Eny tokoa, tamin'ny alàlan'i Ludwig no nahafahan'i Ruprecht nanamarina ireo fitadidiny taloha.
Fiverenana ny fisandratana na fiverenana mivantana: Maty tamin'ny novambra 23, 1887 i Helmut, raha teraka tamin'ny 19 1887 tamin'ny volana Oktobra i Ruprecht, dimy herinandro talohan'ny nahafatesan'i Helmut. Noho izany, dia manasongadina tranga iray amin'ny fisarahana ny fisarahana, izay mahatonga ny fanahy iray haniry ny vatan'olombelona mihoatra ny iray isaky ny mandeha. Diniho fa tany Rabe i Ruprecht nandritra ny volana 8 raha mbola velona i Helmut.
Araka izay horesahina ao amin'ny fizarana mitondra ny lohateny hoe, Soul Evolution, heverina fa ny fanahy dia tafiditra amin'ny fampandrosoana ny foetus hatramin'ny vanimpotoana. Raha marina izany, ny fanahin'i Helmut Kohler dia nandray anjara tamin'ny famolavolana fanavaozana vaovao tahaka an'i Ruprecht Schultz raha mbola nanentana ny vatan'i Helmut ihany izy. Nahoana izy io no manao izany?
Amin'ny ankapobeny, ny fanahy dia mampiasa ny fomba fisintonana mba hampivelatra kokoa na hanatratrarana tanjona. Ohatra, raha misy fanahy iray tafiditra amin'ny tetikasa iray hanampiana an'izao tontolo izao, dia mety hanangana karazana fanavaozana maro ao amin'ny faritra samihafa manerana an'izao tontolo izao ny fanahy.
Ny fanahy koa dia afaka mahafantatra ny lamin'ny fitondran-tena, anisan'izany ny famonoan-tena, ary mihevitra fa mety ho fongana ny fisarahana. Hevero fa amin'ny tranga vao teraka indray ao amin'ny vatana vaovao Paul Gauguin | Peter Teekamp, Dia nanandrana namono tena i Paoly, toa an'i Petera tamin'ny vanim-potoana ankehitriny.
Na dia tsy azontsika antoka aza ny momba azy, raha ny momba an'i Helmut, mety ho hitany ny fanahiny fa mety hitranga ny famonoan-tena. Ny fanahiny dia nanomboka ny dingan'ny fampidirana iray hafa tahaka an'i Ruprecht, talohan'ny fahafatesan'i Helmut, hanohy ny fivoarany.
Reincarnation & Fahaiza-manao fiainana talenta taloha: Ruprecht dia nampiseho talenta voajanahary ho mpandraharaha sy mpandraharaha tamin'ny taona 18, lasa mpanankarena nandritra ny fotoana fohy. Toa i Ruprecht dia nitarika ny fahaiza-miasa izay novolavolaina tamin'ny fampidirana an'i Helmut teo aloha.
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 221
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 213
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 213
4. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 213
5. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana virijiny, McFarland, 2003, pejy 214-215
6. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 211
7. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 216